ပြေးလွှားခြင်းဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလား? - Hello Sayarwon
Khine Phoo Ngon မှ ရေးသားသည်။ 11/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ပြေးလွှားခြင်းဟာ နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းထဲမှာ တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြေးလွှားခြင်းက အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး သင့်ခန္ဓါကိုယ် ပုံစံကိုလှစေတဲ့ အပြင် သင့်နှလုံးကိုလည်း ကြံ့ခိုင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ်ခန္ဓါ ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာစေတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ အပြင် စိတ်ကျန်းမာရေးကို အတွက် ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်း အများအပြား ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
၁။ စိတ်ပူပန်မှု တွေကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
သင်ပြေးတဲ့အခါ သင့်ခန္ဓါကိုယ်က endorphins လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးထုတ်ပါတယ်။ အဲဒီဟော်မုန်းဟာ စိတ်ကျရောဂါကုသပေးနိုင်တဲ့ ဆေးတွေနဲ့ သတ်ရောက်မှုခြင်း တူပါတယ်။ endorphins ဟော်မုန်းဟာ adrenaline နှင့် cortisol ကဲ့သို့သော စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထွက်တာကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေ ကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ပြေးလွှားခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖြေလျော့ပေးနိုင်ရုံသာမက အနာဂါတ်မှာ လည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဝင်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပူပန်ခြင်း ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ပြေးလွှားခြင်းဖြင့် ကြီးမားတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်ပါတယ်။
၂။ ပြေးလွှားခြင်းက သင့်ကို ပိုပြီး အိပ်လို့ကောင်းအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းဝေဒနာဟာ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းတွေနဲ့ တွဲလာတတ်ပြီး အိပ်ရေးပျက်ခြင်းက စိတ်ဓါတ်ကျတာကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ပြေးလွှားခြင်းက သင်အိပ်တာကို နှစ်ခြိုက် ကောင်းမွန်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ နေ့ခင်းပိုင်းတွေမှာ ကိုယ်ကာယ လှုပ်ရှားမှု ဘယ်လောက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ပမာဏက အိပ်စက် အနားယူတဲ့ ပမာဏ ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ ပိုပြီး တက်ကြွလုပ်ဆောင်လေလေ အိပ်စက်ရာမှာ ကောင်းမွန်လေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မအိပ်ခင်မှာတော့ မပြေးသင့်ပါဘူး။ မနက်ခင်းစောစော အိပ်ယာထချိန်မှာ ပဲ သေချာ အားစိုက်ထုတ်ပြီး ပြေးလွှားသင့်ပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ ၃ ကြိမ်၊ ၄ကြိမ်လောက် ပြေးသင့်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်ပြေးတိုင်းမှာ ၃၀ မိနစ်လောက်ကြာသင့်ပါတယ်။
၃။ ပြေးလွှားခြင်းက သင့်ကို ပို ထက်မြက်စေနိုင်ပါတယ်။
သင် အသက်တွေ ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ သင့် ဦးနှောက်က တစ်ဖြည်းဖြည်း နှေးကွေးလာပါတယ်။ အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့ အခါမှာ သင်ဟာ သင်တွေးချင်သလောက်မြန်မြန် မတွေးနိုင်တော့ ဘဲ မှတ်ဉာဏ်တွေကလည်း ချို့ယွင်း ပျက်စီးလာပါမယ်။ ပြေးလွှားခြင်းက အဲဒီလို အချိန်မရောက်လာအောင်၊ (သို့) အသက် မကြီးလာအောင်တော့ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြေးလွှားခြင်းက ဦးနှောက်ဆီကို ရောက်တဲ့ သွေးနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ သွေးစီးကြောင်းကို ပိုများစေနိုင်ခြင်းဖြင့် တွေးတောနိုင်စွမ်း နဲ့ မှတ်ဉာဏ်ကို တိုးတက်လာအောင် ကူညီပေးနိုင်မှာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်ပြေးနေတဲ့ သူတစ်ယောက် ဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့ အခါ အခြား မလှုပ်မရှား နေတဲ့ သူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ကောင်းကောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းပိုရှိပြီး၊ ထက်မြက်တဲ့ စိတ်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြေပိုကြာမြင့်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ ပြေးလွှားခြင်းက စားသောက်ချင်စိတ်ကို ပိုများစေနိုင်ပါတယ်။
စားသောက်ချင်စိတ်နည်းတာက သင့်ရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို မကောင်းတဲ့ ဘက်က သက်ရောက်မှုတွေပေးနိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျန်းမာရေးရော၊ စိတ်ကျန်းမာရေးပါ နှစ်ခုစလုံးက ကျန်းမာတဲ့ အစားအသောက်တွေ အပေါ်မူတည်နေပါတယ်။ ပြေးလွှားခြင်းက ဗိုက်ဆာခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ghrelin နဲ့ peptide YY စတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှ ပြေးလွှားရင်း ကုန်သွားတဲ့ ကယ်လိုရီတွေကို ပြန်လည်ရရှိအစားထိုးဖို့အတွက် သင့်ခန္ဓါကိုယ်က အစာပိုစားဖို့တောင်းဆိုတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲလိုစားသောက်ရာမှာ အစားအစာတွေ စားပုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လည်းသေချာ ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ သင်က ပြေးလွှားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အစားအစာကို တော့ ညီမျှအောင်စား ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်မှာ အိပ်မပျော်ခြင်း ၊ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း စတဲ့ပြသနာတွေ နဲ့တွေ့ကြုံနေရပြီဆိုရင် ဒီ ပြေးလွှားခြင်းဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို စမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ရက်သပတ် အနည်းငယ်လောက်သေသေချာချာ ဆက်တိုက်ပြေးပြီးနောက်မှာ သင်ဟာဘယ်လောက်တောင်ပိုကျန်းမာလာပြီး ဘယ်လောက်တောင် ပိုပျော်ရွှင်လာတယ်ဆိုတာကို အံ့သြသွားရမှာပါ။
The Mental Health Benefits Of Running. http://womensrunninguk.co.uk/health/mental-health-benefits-running/ Assessed October 2, 2016
Does Exercise Increase the Appetite?http://www.livestrong.com/article/244704-does-exercise-increase-the-appetite/ Assessed October 2, 2016
3. How Exercise Can Help You Sleep Better. http://www.fitness.com/articles/156/how_exercise_can_help_you_sleep_better.php Assessed October 2, 2016
ကျန်းမာစေမယ့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု များအကြောင်း
လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ